Nuremberg Toy Fair Digital: Chikamu chekunyoresa chakatanga - poindi yemutambo - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 19, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Nuremberg Toy Fair
Iyo Spielwarenmesse Digital inounza indasitiri yepasirese pamwe chete senge: iyo nyowani puratifomu ichave neyakakura chirongwa chinowanikwa kune vese vatori vechikamu pazuva rakarongwa rekutanga rekutengeserana fair kubva Kukadzi 2nd kusvika 6th. Sezvakaziviswa nevarongi, kunyoreswa kwevatengesi nevamiriri venhau zvino kwava kugona.
Kuwedzera kune akasiyana maturusi ekutaurirana, iyo yedhijitari toy fair inopa vatengesi compact tarisiro yemaitiro uye zvitsva. Chikamu chekunyoresa chekushanya kwekutengeserana chinotanga muna Ndira 19.
Kuvhura nemhemberero yekupa mibairo
Kuti toy fair zvichaitika sechiitiko chepamhepo chete, vatambi nguva pfupi yadarika vakasarudza: Nekuda kweiyo corona mamiriro akatenderedza Omicron musiyano, sarudzo yakatorwa kutora danho iri. Kwenguva refu, Spielwarenmesse eG yanga yakanamatira kuhurongwa hwechiso nechiso - ine hutsanana uye chengetedzo pfungwa sehwaro. Pakupedzisira kwaizova kwakasiyana.
Chikamu chehupenyu cheSpielwarenmesse Digital chave kuzotanga nekuvhurwa kwedhijitari muna Kukadzi 2 nekuratidzwa kwe "Toy Award" kune vanokunda, uko kune vese vatori vechikamu muindasitiri vanokokwa. Kufambiswa kwezivo kunotariswawo. Mharidzo dzeToy Bhizinesi Forum dzichafambiswa kuburikidza nepuratifomu mumazuva ese mashanu. Huwandu hwemisoro hunotangira kubva pane zvazvino maitiro ekutengesa uye matoyi kusvika pakushambadzira, kuenderera uye digitization. Iyo "License Hurukuro" uye zvigadzirwa zvinoratidzwa nevaratidziri zvinogonawo kuonekwa kuSpielwarenmesse Digital.
Vese vatori vechikamu vanogona kumaka zviri nyore hurukuro dzinonakidza mukarenda yavo papuratifomu. Pashure paFebruary 6, mharidzo dzichange dzavapo “pakudiwa” semavhidhiyo. Mharidzo dzeToy Bhizinesi Forum dziripo muchiGerman neChirungu.
Pamusoro pezvo, Spielwarenmesse Digital inopa tarisiro yekompakiti yemakambani ese ari kutora chikamu uye mazinga awo. Makambani ese anomiririrwa neavo ekupinda mu "Exhibitors & Zvigadzirwa" menyu chinhu. Pamusoro peruzivo nezve kambani uye vanobatika, iyo mbiri inopa tarisiro yemhando yechigadzirwa uye yakasarudzwa zvigadzirwa zvemukati zvine mavara nemifananidzo.
Kutenda kune akasiyana maturusi ekutaurirana akadai seyakavanzika chats, chats dzeboka, maodhiyo mafoni uye vhidhiyo misangano, vatengesi vanogona kubata varatidziri zvakananga. Misangano yeVirtual inogonawo kurongeka zviri nyore. Iyo chikuva inopawo akawanda ekutsvaga uye mafirita sarudzo. Vanopa vanopa, hutsva, mhando uye marezinesi anogona kuwanikwa nekukurumidza uye kuchengetwa mune yako yaunofarira runyorwa. Nzvimbo dzakakurumbira dzakakosha dzechiitiko cheindasitiri inotungamira dzinoratidzwawo kuSpielwarenmesse Digital.
"Ne Spielwarenmesse Digital tiri kuseta mitsva mitsva"
Chimwe chinonyanya kukosha inzvimbo ye "Networking". Zvichienderana nezvido zvakachengetwa muprofile yemunhu, chikuva chinopa mazano akakodzera kune vese vatori vechikamu. Uchishandisa basa rekutsvaga, vatengi vanogonawo kuwana nyore shamwari dzavo dzebhizinesi uye network navo.
"NeSpielwarenmesse Digital tiri kuseta mitsva mitsva. Nekuda kwepuratifomu, tine network yakakura yeindasitiri yenharaunda yematoyi yepasirese, iyo inosimudzira kuchinjana pamwe nekugadzwa kwehukama hutsva hwebhizinesi, "anotsanangura kudaro Christian Ulrich, mutauriri webhodhi reSpielwarenmesse eG.
Über digital.toyfair.de vatengi vanogona kunyoresa papuratifomu nyowani yebhizinesi uye kugadzira yavo yega mbiri. Matikiti ari kuburikidza newebhusaiti www.toyfair.de/tickets iripo. Matikiti akatotengwa eiyo stationary indasitiri inotungamira chiitiko anoramba ari anoshanda kuSpielwarenmesse Digital.
Kare Indasitiri yematoyi: Bhizinesi reKisimusi rakaderera pane zvaitarisirwa
Inotevera Kukwira kwemitengo yemitengo: Vatambi veGerman vanofanirwa kunetsekana here?
Kufa Chiedza 2: Webhu yakatevedzana inovhenekera kunyaradza kwemitambo
"Fate yeIberia" yeCrusader Kings 3 iri kuuya
Kumukira paKickstarter: Cooperative 4X board game inopemberera kubudirira
Endzone - A World Apart: Kupona kuvaka mutambo unogamuchira yepfumbamwe update